प्रचण्डको ‘कन्फर्टेवल’ भारतीय साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सन्देश हो– चित्रबहादुर केसी - Aayo Raibar
प्रचण्डको ‘कन्फर्टेवल’ भारतीय साम्राज्यवादको दलाली गर्ने सन्देश हो– चित्रबहादुर केसी
in अन्तर्वार्ता, विचार/ब्लग, हेडलाईन
राष्ट्रिय जनमोर्चाले आउँदो चैत २४ देखि २६ सम्म बुटवलमा पार्टीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढेको बताइन्छ । यही फागुन २३ गतेदेखि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । संसद बैठकबाट बर्तमान सरकार विस्थापन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सत्ता समिकरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तै, पछिल्लो तरल राजनीतिक अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर गएको छ । कतिपय प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरु नै खुलेआम विदेशीका लागि ‘कम्फर्टेवल’ सरकार बनाउने घोषणा गरिरहेका छन् ।
संघीयताको विरोध, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रियता र गणतन्त्रको रक्षालगायतका विषय समेटी आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी कसरी गरिरहेको छ ? तथा आगामी दिनमा पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग संक्षेपमा कुराकानी गरेका छौं ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनको स्थान परिवर्तन भएछ, सम्मेलनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो चैत २४ देखि २६ गतेसम्म बुटवलमा गर्ने ठेगान भएको छ । पहिले हामीले त्यही मितिमा काठमाडौंमा सम्मेलन गर्ने तय गरेका थियौं । भर्खरै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्मेलन बुटवलमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जतिबेला हामीले सम्मेलनको मिति घोषणा गरेका थियौं, देशमा कोरोना संक्रमणको त्रास धेरै नै थियो । त्यसकारण काठमाडौंमा प्रतिनिधिमुलक सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएको हो । तर, अहिले कोरोनाको त्रास कम भएको छ । यद्यपी पुरै हटेको भने छैन । यो अवस्थामा हिजो तय गरिएको प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकको संख्यालाई दोब्बर पारिएको छ । जस्तो कि कुनै जिल्लाका लागि पाँच जना प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक तोकिएको थियो भने अब त्यो जिल्लाले १० जना पठाउन पाउनेछन् । अब अलि ठुलो संख्यामा सम्मेलनमा उपस्थिति हुने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौं ।
यस्तै, सम्मेलनका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन, स्वयम्सेवक परिचालन लगायतका व्यवस्थापकीय काम अगाडि बढिरहेको छ । सम्मेलन भब्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि अहिले हामी बुटवलमै बसेर तयारी गरिरहेका छौं ।
यही फागुन २३ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका भूमिका कस्तो हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको दिन पुस ५ गतेदेखि नै हामीले यो कदम गलत छ र संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै आएका थियौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेर संविधानलाई ट्रयाकबाट बाहिर जानबाट रोकेको छ । त्यसका लागि सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । संसद पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, विभिन्न दल र संघ संस्थालाई पनि पार्टीको तर्फबाट म अभिनन्दन गर्छु ।
अब बस्ने संसद बैठकबाट संसद पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक शक्तिहरुले सरकार बनाउनेछन् । हामीले तिनिहरुलाई समर्थन गर्छौं । अझै पनि नेकपा औपचारिक रुपमा फुटेको छैन । ओलीलाई हटाएर नेकपाले आफ्नै पार्टीको सरकार बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । एउटै पार्टीको सरकार बने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । यदी त्यसो हुन सकेन भनेपनि प्रतिगमनविरुद्ध विरुद्ध आन्दोलन गर्ने दलहरुको सरकार बन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभामा हाम्रो पार्टीको एक जनामात्रै सांसद हुनुहुन्छ । सरकार बनाउने विषयमा हाम्रो निर्णायक मत हुँदैन । तैपनि प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति रहन्छ ।
अब फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आउने सम्भावना देखियो नि ?
जनताले राजनीतिक अस्थिरता भयो, देशमा विकास भएन, जनताले दःख पाए भनेर नेकपालाई करिब दुई तिहाई बहुमत दिएर पठाए । त्यो जनमतलाई ओलीले क्षतविक्षत पारे । आफ्नो पार्टीको विवाद समाधान गर्न नसकेर संसदमाथि आक्रमण गरे । उनले गरेको प्रतिगामी कदम सच्याउन दुई महिना भन्दा बढी समय लाग्यो ।
नेपाली राजनीतिक दलहरुमा इमान र नैतिकताको राजनीति गर्ने चलन छैन । राजनीतिक सिद्धान्त र इमानको भन्दा पनि दलबदल, तानातान गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिताको संरक्षण गर्ने काम हुँदै आइरहेको छ । अहिले ओलीले सत्ताको आडमा राष्ट्रको ढुकुटी निम्त्याएर सांसदहरु किन्ने, पैसा वा पद रोज भन्ने गरिरहेका छन् । राजनीतिको यस्तो घृणित खेलले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ । जनताका लागि गर्नसक्ने सामान्य सुधारका कामसमेत यिनीहरुले गरेनन् । आपसी खिचातानी र विादमै समय खर्च गरिरहेका छन् । अब फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता आउने र हिजोकै विकृति दोहोरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका विरुद्ध जनता सचेत हुनुपर्छ । खबरदारी गर्नुपर्छ । जनमतलाई गलत ढंगले दुरुपयोग गर्नेहरुलाई जनताले सजाय दिन सक्नुपर्छ ।
प्रचण्डले त अब ‘कम्फर्टेवल’ राजनीतिक समिकरण बनाउने भनेका छन्, त्यसको अर्थ के हो ?
नेपालको राजनीतिमा भारतीय र अमेरिकी साम्राज्यादीलाई खुशी नपारीकन सत्ता र शक्तिमा जान सकिँदैन भन्ने छ । त्यसकारण सत्ताधारीहरु जहिल्यै पनि सत्तामा जान वा त्यहाँ टिक्न साम्राज्यवादीहरुलाई खुशी पार्ने प्रयास गर्छन्, उनीहरुको दलाली, चाकडी गर्छन् । यो क्रम २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको छ । त्यसकारण उनीहरुले पनि यहाँका दलहरुलाई लडाएर, भिडाएर वा जनताका बिचमा फुट पारेर नेपालका सरकारलाई आफू अनुकुल काम गर्ने बनाइरहेका छन् ।
अहिले प्रचण्डले पनि आफूहरु, कांग्रेस र मधेशवादी दल मिल्दा भारतलाई कन्फर्टेवल हुने बताइरहेका छन् । यो साम्राज्यवादीलाई ‘मलाई समर्थन गर, तिम्रो लागि काम गर्छु’ भन्ने सन्देश हो ।
राजनीतिक दलहरुले देशका लागि होइन, जनताका लागि होइन, अर्कैका लागि दलाली गर्ने र उनीहरुको अनुकुलमा काम गरेर भएपनि सत्तामा बस्न चाहन्छन् । प्रचण्डको त विगतको इतिहासम पनि राम्रो छैन । उनले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतलाई खुशी पार्न ५ नं प्रदेशलाई पहाडबाट तराई अलग गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याए । त्यो अखण्ड नेपालका विरुद्धको जनताविरुद्धको प्रस्ताव थियो । त्यसका विरुद्ध जनताले संघर्ष गर्नुपयर्यो । संघीयता यो देशका लागि ठिक छैन भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं । झन् उनीहरुले जातीय संघीयता कायम गर्ने, तराई र पहाडलाई अलग गर्ने, नागरिकतालाई खुकुलो बनाउने जस्ता राष्ट्रविरोधी प्रयत्न गर्दै आइरहेका छन् । त्यो केवल सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि हो । अहिले पनि त्यस्तै खालको भारतको हित अनुकुल काम गर्ने सन्देश दिएका छन् ।
अझ यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादलाई पनि खुशी नबनाइकन सत्तामा जान पाईंदैन भन्ने छ । त्यसको लागि अहिलेदेखि नै एमसीसी पारित गर्छु भन्न थालेका छन् । एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू भयो भने नेपाल अमेरिकी साम्राज्यादी सेनाको परेड खेल्ने स्थल हुनेछ । यस्तो खतरनाक विषयमा समेत दलहरु आँखा चिम्लिएर साम्राज्यादीको दलाली गरिरहेका छन् ।
सरकार र विप्लवबीच भएको सहमतिलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुन रुपमा लिएको छ ?
विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु सकारात्मक हो । त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । उनीहरुले जुन उग्र गतिविधि गरिरहेका थिए, त्यो गलत थियो । अहिले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालमा सशस्त्र संघर्ष गर्ने अवस्था छैन ।
हामीले २०२८ सालमा तत्कालिन झापाली समूहले गरेको उग्र गतिविधि पनि देख्यौं । २०५१ सालदेखि माओवादीलको हिंसात्मक गतिविधि पनि देख्यौं । संसदीय व्यवस्था खत्तम पार्न भनेर हिँडेका माओवादीहरु अहिले यही संसदीय आहालमा डुबुल्की लगाइरहेका छन् । त्यति ठूलो संख्यामा भौतिक सम्पत्तिमाथि क्षति गरेर, हजारौं निहत्था नागरिकको हत्या गरेर उनीहरु फेरि यही संसदभित्र आईपुगे । प्रचण्ड–बाबुरामले छोडेको उग्र गतिविधिलाई विप्लवले निरन्तरता दिन खोजेका थिए । तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यो सफ हुने सम्भावना थिएन त्यसकारण छिट्टै सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्ने सहमति गरेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य कदम हो ।
हामीले जनताको हित गर्ने नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि संघर्ष गर्छौं । संघर्षका विभिन्न रुपहरु हुन्छन् । कहिले शान्तिपूर्ण र कहिले सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ । तर, समय र परिस्थिति नहेरि गरिने उग्र गतिविधिबाट देश र जनताले उपलब्धि होइन, क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । समय र परिस्थिति नहेरी हुने उग्र गतिविधिको हामी विरोध गर्छौं ।
जनताले निकै भरोसा गरेर दुई तिहाई मत दिएर पठाएको नेकपाले एकलौटी सरकार संचालन नगरेर अहिले जुन जात्रा देखाइरहेको छ, यो गलत छ । यद्यपी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कम्युनिष्ट होइन, तैपनि हँसिया र हथौडाको झण्डा देखाएर उसले जनतामा गएर कम्युनिष्ट जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो, जनताले भरोसा गरेर मत दिए । उनीहरुले जनमतको अपमान गरेर अहिले दुनियाँ हसाईंरहेका छन् । फेरि पनि नेकपा एक हुँदा र उनीहरुको एकलौटी सरकार बन्दा नै देशमा स्थिरता कायम हुन्छ र लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुनुका साथै राष्ट्रियताको पनि केही हदसम्म रक्षा हुनसक्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । सत्ताको खिचातानी र र राजनीतिक अस्थिरता एवम् हिजोकै संसदीय व्यवस्थाका फोहोरी खेलहरु फेरि दोहोरिने खतरा बढ्नेछ ।
जनताले गलत कामको विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ । गलत गर्नेहरुलाई सजाय दिनुपर्छ । अहिलेसम्म यो देश शासकहरुले होइन, जनताले नै बचाएको हो । जनता जहिल्यै पनि सचेत र चनाखो हुनुपर्छ । हामीले त्यसको लागि जनतालाई सचेत र संगठित पार्न निरन्तर प्रयास गरिरहन आवश्यक छ ।युगदर्शन
जापानी बजारमा पुग्याे काली मार्सी चामल, क्यानडा निर्यातको अन्तिम तयारी
फिल्म ‘प्रेमगञ्ज’ का लागि कलाकारको खोजी, नायक नायिका बन्ने अवसर